Ololaha Bilicaynta Dalka oo Muqdisho Laga Daahfuray (Sawirro) – Radio Daljir
May 25, 2017 3:55 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa si rasmi ah u daah furay Ollolaha nadaafadda ee bilicda dalka oo maanta ka bilowday magaalada Muqdisho, kaasoo lagu aruurinayo qashinka yaala goobaha aan loogu tala galin iyo wadooyinka magaaalda.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shaqaalaha xafiiskiisa kala qayb qaatey qashin aruurinta waxuuna ku soo wareegay dhaamaan xafiisyda iyo meelaha ay yalaaan qashinka,waxuu kaloo soo eegay afaafka hore ee madaxtooyada oo laga wadey Ollaha nadaafada. Waxuuna ku dhiiri galiyey shaqaalaha xifiiskiisa inay ilaaliyaan nadaafada dalka iyo bilicda wadanka si loo helo deegaan nadiif ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegey in ollolahan uu noqon doono mid qaran bil walba Khaamiista ugu dambeysa laga samaynayo dhamaan gobollada dalka, waxuuna raaciyey in loo baahan yahey bulshada Soomaaliyeed in ay is abaabulaan una diyaar garoobaan sii ay iskood wax u qabsan lahaayeen.
“Caasimadda Muqdisho waa muraayada dalka, sidaas daraadeed mashruucan olalaha nadaafadda ee bilicda dalka, waxuu soo celinayaa bilicdii ay caasimadu laheyd. Horumarka uu dalku ku tallaabsanayo maalin walba waxey keentay in dadkeenu ku dhiiradaan sidii ay iskood dalkooda wax ugu qaban lahaayeen, shirkadaha maxaliga ah ee ka shaqeeya nadaafadda waxaa fursad loo siiyey in kaalintooda ay qaataan. Nadaafadu waa waajib diini ah oo nooga wada baahan inaan ka wada shaqeyno.”
Dhamaan xarumaha dowlada iyo degmooyinka Muqdisho ayaa laga sameynayaa Ollolah nadaafadeed, iyadoo ay Xukuumadda iyo Maamulka gobolka Banaadir hormuud u yihiin isu soo baxan lagu nafiifinayo bilicda Caasimadd.
Shirkii Golaha Wasiirada Puntland oo Arrimo Muhiim ah looga Hadlay